FICHỊ DỊ OKE MAKA USORO FAỊLỤ IKPEAZỤ - ESI EDOZI YA? - WINDOWS - 2019
Fichị dị oke maka usoro faịlụ ikpeazụ - esi edozi ya?
Na ntuziaka a, n'ụzọ zuru ezu banyere ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịdee faịlụ ọ bụla (ma ọ bụ nchekwa na faịlụ) gaa na USB flash drive ma ọ bụ diski, ị na-ahụ ozi na "faịlụ ahụ buru ibu maka usoro faịlụ a." E nwere ọtụtụ ụzọ isi dozie nsogbu ahụ na Windows 10, 8 na Windows 7 (maka windo ngwa ngwa nwere ike iwegharị, mgbe ị na-edegharị ihe nkiri na faịlụ ndị ọzọ, na ọnọdụ ndị ọzọ).
Nke mbụ, ihe kpatara nke a: ihe kpatara ya bụ na i detuo faịlụ nke karịrị 4 GB n'ogo (ma ọ bụ folda ahụ i deturu nwere faịlụ ndị dị otú a) na kọmputa USB flash, diski ma ọ bụ ngwa ọzọ n'ime usoro faịlụ FAT32, usoro faịlụ a nwekwara njedebe na otu faịlụ, ya mere, ozi ahụ na faịlụ ahụ buru ibu.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na faịlụ ahụ buru ibu maka usoro faịlụ ikpeazụ
Dabere na ọnọdụ na ọrụ ndị dị na ya, ụzọ dị iche iche dị iche iche iji dozie nsogbu ahụ, anyị ga-atụle ha n'usoro.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere usoro faịlụ nke mbanye
Ọ bụrụ na usoro faịlụ nke windo mbanye ma ọ bụ diski adịghị mkpa maka gị, ịnwere ike ịpị ya na NTFS (data ga-efu, usoro na-enweghị ihe ọmụma data akọwapụtara n'okpuru).
Na Windows Explorer, pịa aka na nri, họrọ "Hazie."
Kọwaa usoro NTFS.
Pịa "Malite" ma chere maka nhazi iji mezue.
Mgbe diski nwere usoro NTFS, faịlụ gị ga-adaba na ya.
N'okwu ahụ mgbe ịkwesịrị ịgbanye ụgbọala site na FAT32 na NTFS na-enweghị ihe data, ị nwere ike iji mmemme ndị ọzọ (nke Aomei Partition Assistant Standard nwere ike ime ya na Russian) ma ọ bụ jiri akara iwu:
Ntughari D: / fs: ntfs (ebe D bụ leta nke disk ka a gbanwee)
Na mgbe ị gbanwee ka ị denye faịlụ ndị dị mkpa.
Ọ bụrụ na ejiri flash drive ma ọ bụ diski maka TV ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ na-adịghị ahụ "NTFS
Na ọnọdụ ebe ị ga - esi nweta njehie "faịlụ ahụ dị oke maka usoro faịlụ ikpeazụ" mgbe ị na - edegharị ihe nkiri ma ọ bụ faịlụ ọzọ na kọmputa USB na - eji na ngwaọrụ (TV, iPhone, wdg) nke na - adịghị arụ ọrụ na NTFS, e nwere ụzọ abụọ iji dozie nsogbu ahụ :
Ọ bụrụ na nke a ga-ekwe omume (maka ihe nkiri ọ ga-ekwekarị omume), chọpụta ụdị ọzọ nke otu faịlụ ahụ ga-atụle ihe na-erughị 4 GB.
Gbalịa ịkpụzi ụgbọala na ExFAT, ọ ga-akacha rụọ ọrụ na ngwaọrụ gị, ọ gaghị enwe oke na ntinye faịlụ (ọ ga-abụ ihe ziri ezi, ma ọ bụghị ihe ị ga-ezute).
Mgbe ịchọrọ ịmepụta ụgbọala na-agba ọsọ UEFI, ihe oyiyi ahụ nwere faịlụ dị ukwuu karịa 4 GB
Dị ka a na-achị, mgbe ị na-ekepụta ngwa ngwa draịva maka usoro UEFI, a na-eji faịlụ FAT32 eme ihe ma ọ na-emekarị na ị pụghị ide faịlụ mbiet na kọmputa USB ma ọ bụrụ na ọ nwere install.wim ma ọ bụ install.esd (maka Windows) karịa 4 GB.
Enwere ike idozi nke a site na ụzọ ndị a:
Rufus nwere ike ịdefe ụgbọala NTFS na UEFI (gụkwuo: bootable USB flash drive na Rufus 3), ma ị ga-achọ iji gbanyụọ Sigid Boot.
WinSetupFromUSB nwere ike ịkekọrịta faịlụ karịrị 4 GB na usoro faịlụ FAT32 ma "kpọkọta" ha ugbua n'oge echichi. A na-ekwusara ọrụ ahụ na version 1.6 beta. E chebewo ya na nsụgharị ọhụrụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa faịlụ FAT32, mana dee faịlụ ahụ na ụgbọala
N'okwu ahụ mgbe ị nweghị ike ime ihe ọ bụla iji tọghata faịlụ faịlụ (ụgbọala ga-ahapụ na FAT32), achọrọ faịlụ ahụ ka ọdebe na nke a abụghị vidio nwere ike ịchọta na obere, ị nwere ike ịwaa faịlụ a site na iji nchekwa ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, WinRAR , 7-ZIP, na-ekepụta archive multi-volume (ya bụ, faịlụ ahụ ga-ekewa n'ime ọtụtụ ebe nchekwa, nke ga-abanye otu faịlụ).
Ọzọkwa, n'ime 7-Zip, naanị ị nwere ike ịkewaa faịlụ ahụ na akụkụ, na-enweghị archiving, na mgbe e mesịrị, mgbe ọ dị mkpa, jikọta ha n'otu faịlụ faịlụ.
Echere m na usoro ndị a chọrọ ga-arụ ọrụ n'okwu gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị - kọwaa ọnọdụ na ihe ndị a, m ga-anwa inyere aka.